Ogaden News Agency (ONA) – Xubno Katirsan Baarlamaanka Maraykanka oo Mooshin Kakeenay Taliska Wayaanaha.
Xubno Katirsan Baarlamaanka Maraykanka oo Mooshin Kakeenay Taliska Wayaanaha.
Posted by Dulmane	/ August 29, 2017
Xubno katirsan baarlamaanka wadanka Maraykanka oo indhawaalaba waday mooshin kadhan ah taliska wayaanaha ayaa bilaabay olole xoog leh oo ay kudoonayaan in ay culays kusaaraan taliska wayaanaha.
Sida aan xogta kuhelayno xubnaha baarlamaanka Maraykanka katirsan ayaa doonaya in taliska wayaanaha lagu iqaabo xasuuqa ba’an ee uu kuhayo shacabka uu gumaysto ee kudhaqan wadanka Itoobiya, xubnaha baarlamaanka ayaa dowlada Maraykanka kadalbaday in ay qaadato mas’uuliyada kasaaran xuquuqda aadamaha.
Xubnahan taliska wayaanaha mooshinka kakeenay ayaa sheegay in ay golaha Congress-ka ugudbin doonaan si ay usixiixaan, waxayna xubnuhu aad ugu rajo wayn yihiin in ay dowlada maraykanku wax kaqaban doonto dhibka haysta shacabka Itoobiya.
Dhinaca kale malaayiin dadka lagumaysto ee Itoobiya kudhaqan ah ayaa dhankooda sixiixay mooshinka ay wadaan baarlamaanka Maraykanku, kaas oo hada ay sixiixeen malaayiin dhibanayaal ah oo kusugan daafaha aduunka.
Dowladaha ree galbeedka ayaa dadkooda uga digay in ay usafraan wadanka qasku uu kajiro ee Itoobiya, waxaana wadamadaas kamid ah Maraykanka, Canada, Ingiriiska, Jarmalka, Norway iyo Australia.
Dinaca kale wadamada ree galbeedka ayaa joojiyay inta badan dhaqaalihii ay siin jireen xukuumada wayaanaha, waxayna dowladuhu ogaadeen in dhaqaalaha ay bixiyaan lagu gumaado shacabka aan isdifaaci karin.